3 Zvidzidzo zvekupindwa muropa ne Project Management Professional Training PMP
3 Zvidzidzo zvekupindwa muropa ne Project Management Professional Training
Project Management Professional (PMP) inozivikanwa pasi rose unyanzvi hwokugadzirisa chinopiwa ne Project Management Institute (PMI). Zvichida unoziva kune ikozvino 729,552 inoshanda PMP vanhu vanozivikanwa & 284 zvitsauko zvakarongeka munyika dzakawanda dzeE210 nenzvimbo munyika yose. Innovative Technology Zvigadziro zvinopa (Project Management Professional) kudzidziswa kwePPP muGurgaon, Noida, Delhi NCR, inowedzera kupfuura 9 Cities muIndia, USA, UK uye Australia. ITS inopawo kuInternet Kudzidziswa kweProject Management Professional Course Kuzvinyoresa pakudzidzisa paIndaneti.
Ndiani Anofanira Kushandisa?
Sarudza uye Uzoita PMP yako
2. Program Management Management Professional (PgMP)
Sarudza uye Chengetedza PgMP Yako
3. Vakavimbiswa Vachibatanidza mu Project Management (CAPM)
Sarudza uye Chengetedza Chikoro chako
I Project Management Professional (PMP) ndiyo inonyanya kukoshesa indasitiri-inozivikanwa chiyeuchidzo chevatariri veprojekti.
Iwe unogona kuwana PMPs yekufambisa mapurojekiti munharaunda yese nyika uye, kwete zvachose sezvipupuriro zvakasiyana zvinotarisa pane imwe nzvimbo ye geology kana nzvimbo, PMP® inonyatso pasi pose. Sezvo uri PMP, unogona kushanda mune zvinyorwa chero upi zvayo, uye chero hurongwa uye munzvimbo ipi zvayo.
I PMP inowedzera kuwedzera kuwanikwa kwako. PMP vhizimisi vanotora huwandu hwe20 yepamusoro kupfuura vavasinavo vasiri vimbiso dzakaratidzwa sezvinoratidzwa neEarning Power: Project Management Salary Survey, Nhamba yeNyika.
Mabhizimusi anobatsirawo zvakare. Pakazoti pane zvinopfuura 33% zvevashandi vavo vemapurisa ndivo PMP-vakavimbiswa, sangano rinopedzisa huwandu hwemapurogiramu avo panguva, pakushandisa hurongwa uye musangano zvinangwa zvakasiyana. (Kurova kweE Profession® kudzidza, PMI, 2015.)
Mutungamiri wePPP anotaura kuti iwe unotaura uye unonzwisisa mutauro wepasi rose wekushanda kweprojekti uye unoshamwaridzana newe kuboka revashandi, masangano uye nyanzvi pasi rese. Yakashandurwa kuva PMP ndokushandurwa kuva saintrojekiti.
Kana iwe uri mutevedzeri wepurojekiti inotarisira zvikamu zvose zvekuendesa kweprojekti, kutyaira uye kuronganidza mapoka e-utilitarian, ipapo PMP ndiyo chisarudzo chakanaka kwauri.
Chiongorori chekuongorora chinonzi 200 zvakasiyana-siyana mibvunzo, uye iwe une maawa mana kuti upedze.
Kuti uchengetedze PMP yako, iwe unofanirwa kukunda 60 unyanzvi hwekuvandudza unyanzvi (PDUs) sewadhickwork.
Sezvo mutariri wepurogiramu, iwe uri nyanzvi yepamusoro-soro pamucheto unobuda ropa wekusimudzira zvinangwa zvako zvinokosha. Iwe unotarisana nemishonga yakasiyana-siyana, yakabatana yakarongeka, ichiita zvikomborero zvisingagoni kuitika kana mapurogiramu acho akatorwa achizvimiririra.
Kutungamirirwa kwako kunobatsira. Nehurongwa hwekufambiswa kweprogram, mapurogiramu esangano anonyanya kubereka kudarika pasina - 76 yepakati yakasiyana ne54 muzana segore rapera Pulse of Profession® mushumo. Purogiramu Management Professional (PgMP) ® chiratidzo chekunzwisisa kwako uye unyanzvi hwako uye hunoita kuti uve nechimiro chakanakisisa mubasa nekufambira mberi.
Pachine mukana wekuti iwe wakaratidzwa simba rokutarisana nemapurogiramu akasiyana-siyana, akafanana uye oongorora miitiro yakaoma inoparadzanisa unyanzvi, masangano, nzvimbo kana humwe humwe uye kugadzirisa migumisiro kune zvinangwa zvechirongwa, iwe unokwanisa PgMP.
Kutanga nenguva yekuongorora ibhuku rokuongorora
Kuongorora kwechidziro kune 170 yakawanda mibvunzo yezvisarudzo, uye iwe une maawa mana kuti upedze.
Kuti uchengetedze PgMP yako, unofanirwa kuwana 60 unyanzvi hwekuvandudza unyanzvi (PDUs) nguva dzese.
Pasinei nebasa rako rakarongeka, Chirongwa cheChristian Associate muProject Management (CAPM) ® inobatsira ichakuziva mumusika wekushandira uye kuvandudza kushanda kwako uye kukwanisa kuenderera mberi-kana ne-mapoka emagetsi.
Kushamwaridzana nemitemo yakagadziriswa inoita zvibereko zviri nani, sekuonekwa mumakore edu ekupedzisira Pulse of Profession® mushumo. Sezvo CAPM® ichiona kuti iwe unonzwisisa kudikanwa kwekudengenyeka kwenyika yose, unozoenda kune vashandi uye ugare wakagadzirira kufambira mberi.
Purogiramu yekugadzirisa inokurumidza kukurudzira kudanwa. Kuburikidza ne2020, mamiriyoni emamiriyoni e1.57 achaitwa gore roga roga uye vashandi vanokwanisa vanotsvaga. NeCAPM, iwe uchava mumugwagwa wekubudirira kune mamiriro ezvinhu.
Kana zvichiitika kuti iwe ungasvetuka mukana wekutarisira mapurogiramu makuru nekuwana basa kana kusanganisira maitiro ekugadzirisa chirongwa muchikamu chenyu chezvino, ipapo Chirongwa Chigadziriswa mu Project Management (CAPM) chakakodzera kwauri.
Chiongorori chekuongorora chinonzi 150 mazano emibvunzo yakawanda, uye iwe une maawa matatu kuti upedze.
Kuti uchengetedze CAPM yako, iwe unofanirwa kudzorera kuongororwa kwakafanana newa clockwork.
PMP Chiratidzo - 10 Zvikonzero Zvokuwana PMP Chiratidzo